म १५ वर्षे किशोरी हुँ। केही वर्षअघिसम्म मेरो कपाल बाक्लो र लामो थियो। तर, अनौठो तरीकाले कपाल झरिरहेको छ। टाउको अगाडि उखलेजस्तै पार्टपार्टमा कपाल झरेको छ। नयाँ पलाए पनि झरिहाल्छ। जाँच गर्दा केही समस्या देखिन्न। १२ वर्षको हुँदा पहिलोपटक रजस्वला भएको थियो। दुई वर्षदेखि रोकिएको छ, यही कारण त यस्तो भएको हैन?
कपाल झर्ने कारण धेरै हुन्छन्। कीटाणुका कारण पनि कपाल झर्छ। तपाईंको जस्तो समस्या हर्मनको गडबडीले हुनसक्छ। हर्मन गडबडी हुँदा जसरी केटा मानिसको तालु खुइलिन्छ, त्यसैगरी केटीको पनि अगाडिको पाटो वा बीचको भाग पूरै खाली हुन्छ। यस्तो समस्यालाई प्याटन ह्यार लस भनिन्छ। खासगरी केटामा जस्तै एन्ड्रोजेन भन्ने हर्मन बढेर केटाको जस्तै तालु खुइलिने सम्भावना हुन्छ।
परिवारमा अरुलाई पनि यस्तो समस्या छ भने त्यो वंशाणुगत हुन सक्छ। चर्म रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ। पुरुषमा जस्तै हर्मनको कारणले हो भने निको हुन गाह्रो हुन्छ।
मेरो अनुहार एकदमै चिल्लो छ। अनुहार र जीउमा पूरै डन्डिफोर आउँछ। कारण के होला?
मान्छेको बढ्दो उमेरसँगै डन्डिफोर प्रायः सबै मानिसमा आउँछ। चढ्दो जवानीसँगै हर्मन चलायमान र वृद्धि पनि हुन्छ। हर्मनको एक्टिभिटी बढ्दा मानिसमा शिवासिया ग्रन्थि पनि बढ्छ। यसले डन्डिफोर देखिन्छ। यो ग्रन्थीको कारण बढेको डन्डिफोर उमेर बढ्दै गएपछि कम हुन्छ। डन्डिफोरलाई युवा अवस्थाको संकेत भनिए पनि यसले कतिपयको अनुहारै कुरुप पार्न सक्छ। त्योबाहेक चिल्ला खानेकुरा, क्रिम, तेल र जेलहरु एवं जंकफुड प्रयोगले पनि डन्डिफोर बढ्छ। खासगरी कुन उमेर हो र कति डन्डिफोर छ भन्ने थाहा भएपछि विस्तारै अन्य जोखिमयुक्त बानी घटाउँदै लैजानुपर्छ। चिल्लो प्रयोग कम गर्ने, ८/९ घन्टा सुत्ने, नकोट्याउने, सागपात, फलफुल र पानी प्रसस्त खाने र तनावमुक्त रहने। निको पार्ने नाममा जथाभावी औषधी खाने र निचोर्ने भने गर्नुहुन्न। धेरै नराम्रो हुनेगरी आएमा औषधि सेवन गर्ने र विशेष मल्हम लगाउन सकिन्छ। यस्तो उपचार कम्तीमा तीन महिना गर्नुपर्छ। घरेलु तरीकाबाट पनि डन्डीफोरबाट बच्न सकिन्छ। सुत्नुअघि तातोपानीले मुख धुने र अनुहारमा तातो पानीको बाफ दिने गर्नुपर्छ।
म ३२ वर्षे पुरूष हुँ। मेरो आँखा मुन्तिरको भागमा कालो पोतो आएको छ। के कारणले यस्तो भएको होला?
अनुहारमा कालोपोतो आउनुको प्रमुख कारण घाम हो। घामबाट आउने परावैजनी रंगको विकिरणले कालोपोतो आउँछ। खासगरी १० देखि २ बजेसम्मको घाम छालाका लागि हानिकारक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञलाई देखाएर सही खालको सन ब्लक क्रिम लगाउने र घामबाट बच्ने अन्य उपाय अपनाउनु पर्छ। यस्तो समस्या हटाउन पनि सागपात, पानी र फलफूल बढी खानुपर्छ।
मेरो छाला धेरै राम्रो थियो। ६ महिनाअघि मात्रै बच्चा पाएको हुँ। सुत्केरी नहुँदासम्म यस्तो समस्या थिएन्। अहिले विस्तारै अनुहारमा पोतो बढ्दै गएको छ। फेयर एन्ड लभ्ली क्रिम लगाउँछु, तर घटेको छैन। यसको उपचार के होला?
माथिकै प्रश्नमा भनेजस्तै पोतोको कारण मुख्यगरी घाम नै हो। त्यसबाहेक गर्भवति भएपनि महिलामा हुने हर्मन स्टेजोनमा बृद्धि हुँदा कालोपोतो बढ्छ। विस्तारै सुत्केरीपछि हर्मनको मात्रा पनि घट्दै गएर पोतो हराउनुपर्छ। तर गर्भवती र बच्चालाई पनि घाममा राखिने भएकाले महिलाको घामसँग सम्पर्क बढ्छ र कालोपोतो पनि बढ्छ। यस्तो समस्या विस्तारै कम हुँदै जान्छ। केही महिलामा लामो समयसम्म पनि रहन्छ। यस्तो अवस्थामा घामबाट गरिने बचावट बढाउने र जाँच गरेर त्यहीअनुसार क्रिम प्रयोग गर्ने।